रोचक/बिचित्र Archives - Page3of 21 - SangaloKhabar
चार वर्षसम्म पेप्सी पिउन नपाउने सजायँ
एजेन्सी । कार चोरी गर्ने मानिसमाथि अदालतले कस्तो सजायँ गर्ला ? जेल सजायँ वा नगद जरिवाना । तर अमेरिकामा भने एकजना कार चोरीका अभियुक्तलाई अदालतले चार वर्षसम्म पेप्सी पिउन नपाउने फैसला गरेको छ । अमेरिकाको हवाईस्थित अदालतले २१ वर्षका एक अभियुक्त विरुद्ध यस्तो फैसला गरेको हो । समाचार अनुसार क्रिस्टोफर मोन्टीलियानो नामका ती अभियुक्तलाई उनको मनपर्ने पेय पदार्थ पेप्सी चार वर्षसम्म नपिउने आदेश गर्ने न्य...
पहिलो सन्तान जन्माएको २६ दिनपछि जन्माइन् जुम्ल्याहा
बीबीसी । बंगलादेशमा एउटा यस्तो घटना घटित भएको छ जसले त्यहाँको चिकित्सा जगतका साथै सर्वसाधारण पनि चकित छन् । २० वर्षे एक युवतीले पहिलो सन्तान जन्माएको २६ दिनपछि जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी छिन् । पहिलो बच्चा जन्मेका बेला डाक्टरलाई उनको पेटमा जुम्ल्याहा बच्चा भएको थाहा थिएन । पहिलो सन्तानलाई जन्म दिएको करिब एक महिनापछि आरिफ सुल्ताना नामकी युवतीले शल्यक्रियामार्फत् जुम्ल्याहा बच्चा जन्माइन् । तीन...
अनौठो होटल, जहाँ ६० हजार सिँढी उक्लिएर ग्राहक पुग्दछन्
एजेन्सी । आफ्ना ग्राहकलाई नौलो अनुभुति दिलाउनका लागि दुनियामा अनेक खालका होटेल खुलेका छन् । यस्तै एउटा अनौठो होटल चीनमा छ । चीनको येल्लो माउन्टेनमा अवस्थित उक्त होटलमा पुग्नका लागि ६० हजार सिँढी चढ्नु पर्दछ । उक्त चारतारे होटलको नाम जेड स्क्रिन होटल हो । पहाडमा १८३० मिटर उचाईमा रहेको उक्त होटलबाट हंगशन पर्वतीय श्रृंखलाको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा १५ सय वर्षभन्दा पनि पूरा...
सहकर्मीले पादेको भन्दै अदालतमा मुद्दा
एजेन्सी । हालै अष्ट्रेलियामा एक अपत्यारिलो मुद्दा दर्ता भएको कुराले निकै हास्यासपद चर्चा पाएको छ । अष्ट्रेलियाको मेलबर्नका डेभिड नामक एक व्यत्तिले आफ्नो कार्यालयमा आएर पाद्ने गरेको आरोप लगाउँदै आफ्ना सहकर्मीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरि करिब २० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । निर्माण इन्जिनियरको काम गर्ने डेभिड नामक ती व्यत्तिले आफ्ना सहकर्मीले प्रत्येक दिन आफ्नो कार्यालयमा आएर पाद्ने गरेको...
मान्छेलाई लाग्छन् यस्ता अनौठा डर
सोम्निफोबियाः निद्राको भयलाई सोम्निफोबिया भनिन्छ। यो भय भएको मान्छे निदाएपछि मरिने हो कि भन्ने त्रासले ग्रस्त हुन्छ र निदाउन चाहँदैन। नोमोफोबियाः एक सर्वेक्षणका अनुसार बेलायतको आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई नोमोफोबिया छ। यस भयले गाँजेपछि मोबाइल फोनमा सिग्नल नआउने हो कि अथवा यसको ब्याट्री सिद्धिने पो हो कि भन्ने डर लागिरहन्छ। प्लुटोफोबियाः यो पैसादेखि डराउने मनोदशा हो। यसमा धनी भइएला कि भन्ने भय पनि...
जहाँ मानिस एक पटक सुते पछि महिनादिनसम्म उठ्दैनन्
काठमाडौं । तपाईं कति समय निदाउनु हुन्छ ? प्रायः ५/७ घण्टा त होला नी ! तर, काजगिस्तानको एक गाउँमा एक पटक सुते पछि मानिसहरु महिना दिनसम्म पनि उठदैन् । काजगिस्तानको उत्तरी क्षेत्र कलाची गाउँका मानिसमा रहस्यमय तरिकाले सुत्छन् । जव यिनीहरु एक पटक सुत्छन एक महिनासम्म उठ्दैनन् । यसलाई रोग नै मानिएको छ । कलाचीमा सन् २०१० मा पहिलोपटक यस्तो भएको थियो । त्यसबेला बच्चाहरु अचानक स्कूलमा ढलेर निदाएका थिए । त...
नानजिङ, १२ चैत । पुरातत्वविद्हरुले चीनको जियाङ्सु प्रान्तमा दुई हजार ५०० वर्ष पुरानो चिहानबाट सग्लो अन्डा भेटिएको सोमबार जनाएका छन् । उत्खनन्का क्रममा अन्डाले भरिएको जारमा एउटा मात्र अन्डा फुटेको अवस्थामा पाइएको थियो । नानजिङ म्युजियम इन्स्टिच्यूट अफ आर्कियोलोजीका अनुसन्धाताहरुले लियाङ शहरको शाङसिङस्थित एउटा विशाल चिहानमा उत्खनन् गर्दा ढक्कन लगाइएको माटोको भाँडोमा ती अन्डा फेला परेको बताएका छन्...
१२१ वर्षदेखि सजाय भोगिरहेको एउटा रुख
एजेन्सी । अहिलेसम्म तपाईले केवल मानिसले अपराधमा सजाय पाएको सुन्नुभएको छ होला । कहिलेकाहीँ जनावरलाई समेत सजायँ दिएका अनौठा खबर पनि आउने गर्दछन् । तर सजायको यो दायरा केवल मानिस र जनावरमा मात्र सिमित छैन रहेछ । पाकिस्तानमा एउटा रुखले १२१ वर्षदेखि कठोर सजाय भोगिरहेको छ । १२१ वर्षअघि गिरफ्तार गरिएको यो रुखले त्यस समयदेखि कठोर कैद सजाय काटिरहेको छ । पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तस्थित लण्डी कोत...
पत्याउनु हुन्छ ! कीराबाट पाउरोटी
फिनल्यान्डको एक बेकरी उद्योगले हामीकहाँ झ्याउँकीरी भनिने एक प्रकारको फट्यांग्रालाई मैदामा मिसाएर पाउरोटी निर्माण गरी बिक्री–वितरण गर्ने गरेको छ । सुन्दै घिनलाग्ने उक्त पाउरोटीमा ७० प्रतिशत जति पिसिएको झ्याउँकीरी मिसाइन्छ । सुन्दा अनौठो लागे पनि यो पाउरोटी निकै स्वस्थकर तथा स्वादिलो हुने बताइएको छ । यो पाउरोटी क्याल्सियम, भिटामिन तथा फ्याटी एसिडले भरिपूर्ण हुन्छ । झ्याउँकीरी प्रयोग गरिएका कारण ...
संसारमा भएका यस्ता विचित्र घटना
चट्याङ लागेर मान्छेको मृत्यु भएको खबर बेलाबेला आउँछ। तर, चट्याङले कसैलाई नवजीवन दिएको तथ्य अपत्यारिलो लाग्छ। सन् १९८२ मा अमेरिकी नागरिक एड्विन ई रबिन्सनको शरीरमा वज्र पर्‍यो। त्यसअघि उनी आँखा देख्दैनथे, कान सुन्दैनथे। नौ वर्षअघि एउटा भयानक दुर्घटनामा परेर उनले आँखाको ज्योति गुमाएका थिए। चट्याङ लागेर आधा घण्टाजति बेहोश भएका थिए, उनी। त्यसपछि जब होशमा आए, उनको जीवन कायापलट भयो। उनले देख्न थाले, स...